တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: at the teashop
အမ.. ဒီစာစုလေး အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ.. ဒီစာကို အပြင်မှာ ပုံနှိပ်တဲ့ မဂ္ဂဇင်းတခုခုမှာ ဖော်ပြရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ.. အမ ပို့ဖြစ်လား.. ပို့စေချင်တယ်.
10/16/2006 3:41 AM
ရေးသာရေးလိုက်တာ ပို့ဖို့မရည်ရွယ်ထားလို့ မပို့ဖြစ်ပါဘူး။
ပို့မယ်ဆိုရင်တော့ ပြန်ပြင်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ပြီးပြီးရော ရေးထားတာဆိုတော့လေ .. ။
ဝေဖန်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ .. နော် ။
10/16/2006 6:02 AM
10/19/2006 3:39 AM
Most of your blog are really good.
10/19/2006 3:40 AM
10/19/2006 6:13 AM
V good article. why don't u send it toaweekly journal or magazine?
11/23/2006 6:53 AM
မမေဓာဝီ.. စာတွေ ထပ်မရေးဖြစ်တော့လည်း အရင်ရေးထားတာလေးတွေ ချန်ထားရစ်ခဲ့တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်နော်.. ဒီစာလေးကို ခုမှ ဖတ်ဖြစ်တယ်.. လှပတဲ့ အတွေးအမြင်လေးတစ်ခု ရလိုက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးထပ်တင်ပါတယ်။
very nice post and sane time ur post make me to miss my Dad, coz my dad used to sat that ,,
( သူတို့ဘက်က ကောင်းသည်ဖြစ်စေ မကောင်းသည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်ဘက်က ဖြောင့်မှန် ဖြူစင်စွာနဲ့ လူတွေကို လူလိုဆက်ဆံနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ )
6/28/2009 1:30 PM